Ọ'ụzụ - WRSP
1824: Ch'oe Che-u, onye bụ nna ochie Tonghak, mụrụ na Kyŏngju na ndịda Korea ọwụwa anyanwụ.
1844-1854: Mgbe nna ya nwụsịrị, Ch'oe Che-u hapụrụ nwunye ya na ụmụ ya ka ha gaa Korea. Ọ matara ọtụtụ nsogbu mmekọrịta ọha na eze n'oge ahụ, egwu metụtara ọbụbụeze Korea, na ọtụtụ iyi na echiche dị iche iche na Korea.
1860: Ch'oe Che-u nwere ahụmahụ miri emi banyere Chineke mgbe ọrịa gasịrị. Ọ natara akara nzuzo (yngngbu) na ihe dị nsọ (chumun), nakwa ọrụ ikwusa ozizi ọhụrụ nke eziokwu. Ọ gbakere n'ọrịa ya wee kwusaa ozi ọma ọhụụ ya, Tonghak (Eastern Learning), nye ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya na ndị ọzọ na mpaghara Korea niile.
1864: Na-ama jijiji na ịrị elu nke nkuzi ndị ọzọ na Neo-Confucianism nke gọọmentị, gọọmentị Korea kpọrọ Tonghak nkuzi heterodox ma jide ma gbuo Ch'oe Che-u na Taegu (ndịda Korea ọwụwa anyanwụ). Ch'oe Che-u nyefere onye ikwu ya dị anya, Ch'oe Si-hyŏng, tupu ọnwụ ya.
1870's na 1880's: Ch'ŏe Si-hyŏng, nke abụọ bụ nna ochie Tonghak, wughachiri ma gbasaa nzukọ Tonghak, tumadi n'ime ime obodo ndịda Korea.
1880-1881: A chịkọtara ma bipụta mbipụta mbụ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ Tonghak.
1892-1893: Ndị na-akwado Tonghak kwalitere arịrịọ na ngosipụta na-achọ nhazigharị Ch'oe Che-u na nkwado iwu nke Tonghak. Gọọmentị Korea kwenyere na mbụ wee gbochie arịrịọ ndị arịrịọ ahụ.
1894 (Mmiri): Onye ndu Tonghak dị n'ógbè ahụ Chŏn Pong-jun dugara ndị nkịtị na Tonghak ndị kwere ekwe na nnupụisi nke na-achịkwa ọtụtụ ndịda ọdịda anyanwụ Korea. Gọọmentị Korea rịọrọ ka ndị agha China nyere aka kwụsị nnupụisi ahụ, nke dugakwara aka na Japan. Abanyela n'etiti ndị nnupụisi na gọọmentị Korea na June 1894.
1894 (Mgbụsị akwụkwọ): Chŏn Pong-jun na Ch'oe Si-hyŏng duuru nnupụisi ọhụrụ banyere nchegbu na-arịwanye elu banyere mmetụta Japan na-arịwanye elu na ọchịchị Korea. Mgbe nnupụisi mbụ nke mmeri, gọọmentị na ndị agha Japan gbochiri nnupụisi ahụ wee buso Tonghak ọgụ ike. E jidere Chŏn Pong-jun na ndị isi nnupụisi ndị ọzọ wee gbuo ha, ebe Si-hyŏng na ndị isi okpukpe Tonghak ndị ọzọ gara zoo.
1898: Gọọmentị Korea jidere ma gbuo Si-hyhóng, nke abụọ bụ nna ochie Tonghak.
1900: Nwa Pyŏng-hŭi, nke atọ bụ nna nna Tonghak, ghọrọ onyeisi ndị isi nke Tonghak
1901: Nwa Pyŏng-hŭi gara Japan iji gbanahụ mkpagbu na Korea wee mụta banyere usoro na-akpata mgbanwe ụwa. Ọ nọrọ na Japan ruo 1906. Tonghak hazigharịrị ma gbasaa, ọkachasị na mpaghara ugwu Korea, n'oge ọ na-anọghị ya.
1905: E degharịrị Tonghak na Ch'ndogyo (nkuzi nke ụzọ eluigwe) mgbe njedebe nke Russo-Japanese War na ntinye nke ndị nchekwa Japan na Korea.
1908: Nwa Pyŏng-hŭi gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya dị ka isi nke Ch'ndogyo ma Pak In-ho nọchiri ya. Nwa guzosiri ike na nkuzi na nhazi.
1910: Korea batara na alaeze Japan. Dị ka okpukpe, Ch'ndogyo bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ole na ole n'okpuru nduzi Korea iji lanarị mmegide.
1919: Ch'ndogyo rụrụ ọrụ dị mkpa, ya na ndị Protestant Christian na ndị na-akwado Buddha, na-ahazi ihe ngosi nnwere onwe nke March First. Emechiri ihe ngosi ndị a n'ụzọ obi ọjọọ, na ọtụtụ ndị isi Ch'ndogyo, gụnyere Son Pyŏng-hŭi, jidere, nwaa ma tụọ ha mkpọrọ maka afọ ole na ole sochirinụ.
1921: Halllọ Nzukọ Ezumezu Ch'ndogyo dị na Seoul agwụchara.
1922: Nwa Pyŏng-hŭi nwụrụ n'oge na-adịghị anya mgbe a tọhapụsịrị ya n'ụlọ mkpọrọ.
1925: Esemokwu banyere ndu na nhazi mere ka nkewa banye na Old na New Faction. Agbanyeghị na enwere nkuzi dị iche iche na nkuzi ma ha na-emekọ ọnụ ụlọ, otu abụọ ahụ na-agbaso usoro nhazi nke ụlọ ọrụ dị iche iche ma na-eme ihe omume mmekọrịta, ọdịnala, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche. N'agbanyeghị nchikọta dị nkenke, nkewa a diri ruo oge Agha IIwa nke Abụọ.
1940: N'okpuru nrụgide siri ike site na ọchịchị ndị ọchịchị ndị Japan, Old na New Faction jikọtara. Nmechi na mmegide ndị Japan mụbara ruo mgbe njedebe nke ọchịchị ndị Japan.
1945: Nnwere onwe pụọ na ọchịchị ndị ọchịchị ndị Japan. Ndị na-eme Ch'ndogyo dị mkpa na ụlọ ọrụ izizi iji guzobe gọọmentị post-colonial. Nkewa nke peninshula ahụ hapụrụ ọtụtụ ndị otu nọ na mpaghara ugwu ndị Soviet na-achịkwa. Njikọ dị n'etiti ugwu na ndịda ghọrọ ihe na-esiwanye ike. Enwere ọhụụ dị ọhụrụ n'etiti Old na New Faction na mpaghara ndịda.
1948: E kere North na South Korea. Ŏtù Ndị Enyi Na-eto Eto nke Ch'ndogyo bụ akụkụ nke teknụzụ nke North Korea, mana ọ gbanyere ya n'ime, yana mmalite nke mkpagbu okpukpe. Ch'ndogyo nwekwara ahụhụ ụfọdụ na South n'ihi njikọ ndị a nke Northern.
1949: Agba ochie na nke ọhụụ na South Korea jikọtara ọzọ.
1950-1953: Agha Korea mere. Ọtụtụ ndị kwere ekwe ugwu Ch'ndogyo gbagara South Korea. Na njedebe nke agha ahụ, Ch'ndogyo dị ndụ dị ka okpukpe na South, ebe ọ gara n'ihu na-adị ndụ dị ka ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achịkwa nke ọma na North. Nkewa, mkpagbu, na nsogbu akụ na ụba mere ka ọdịda nke Ch'ndogyo dị na North na South Korea.
1954-1955: Emebere iwu ohuru Ch'ndogyo dị na South Korea iji merie nkewa n'oge oge ọchịchị.
Ọ bụ ezie na ndị nọ na Ch'ndogyo (nkuzi nke ụzọ eluigwe) dị obere, ọ bụrụla akụkụ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke Korea n'oge a, ọkachasị na itinye aka na mmegharị mmekọrịta ọha na eze na mbubreyo nke iri na itoolu na ọkara nke mbụ narị afọ nke iri abụọ. Ihe omuma a mere ka ndi Ch’ndogyo nwee mmekorita nke ndi mmadu na ndi mmadu na North Korea na South Korea n’agbanyeghi ndi mmadu dara na iri abuo na mbu.
Ch'ndogyo sitere na mbu Tonghak (Eastern Learning) okpukpe nke malitere na nke ikpeazụ ọkara narị afọ nke iri na itoolu na Korea. Onye guzobere Tonghak, Ch'oe Che-u (onye aha ya bụ Su-un mara), amụrụ na 1824 n'akụkụ Kyŏngju na ndịda Korea. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na ezinụlọ ya gosipụtara nke ọma ma mara nna ya na mpaghara mpaghara ya, nna Ch'oe dara ogbenye ma nwee ike bụrụ ogbenye. chanban, ma ọ bụ daa yangban (ọkà mmụta-ọrụ. The chanban mebere nke kacha daa ogbenye na yangban otu ọnọdụ. Ha ebighi ebi dị iche na nke ndị nkịtị ma hapụ ohere ịnweta ọkwa gọọmentị kachasị elu. Nna Che-u nna ya dị iri isii na atọ n'oge amụrụ nwa ya. Nne ya bụ iko nwanyị, o yikwara ka ọ lụrụ di ọzọ. Eleghara anya ịlụ di ma ọ bụ nwunye di ya nwụrụ na Chosŏn Korea, ọ bụ ezie na ndị inyom di ha nwụrụ na-enweghị nsogbu na-alụkarị di. Otú ọ dị, ụmụ nke ndị gụrụ akwụkwọ na ndị iko nwanyị, ndị a maara dị ka ọzọ, bụ ndị a na-akpa ókè megide ndị eze na enweghị ohere ịnweta ọkwa ndị ọrụ kachasị elu. Dị ka nwa nke abụọ nke dara yangban, Ch'oe Che-u chere ihu abụọ ihe mgbochi maka ọkwa dị elu nke Korea maka oge ahụ. N'agbanyeghị ịda ogbenye ya, nna Ch'oe Che-u yiri ka ọ nyere nwa ya agụmakwụkwọ na ịhazi alụmdi na nwunye tupu ya anwụọ mgbe Ch'oe Che-u dị afọ iri na isii. Etuola nne ya afọ iri tupu mgbe ọ dị afọ isii. Mgbe nna ya nwụrụ, Ch'oe Che-u hapụrụ ịda ogbenye, na-enwechaghị ohere n'ihi agbụrụ ya, yana obere nka na ọrụ ugbo. Otú ọ dị, ọ gụrụ akwụkwọ, n'ihi ya, ọ kụziiri ụfọdụ ụmụaka nọ n'ógbè ahụ, ma tinyekwuo onwe ha n'ọmụmụ nke Confucianism, Buddha, na Daoism (Beirne 2009: 18-21; Kallander 2013: 38-41).
Mgbe nna ya nwụsịrị, Ch'oe Che-u hapụrụ ezinụlọ ya n'etiti 1844 na 1854 ka ha wagharịa na mba ahụ, ọkachasị na mpaghara ndịda. Ọ bụ n'oge a ka ọ matara banyere ọnọdụ ụlọ na nke mba na-eche Korea ihu na omimi miri emi banyere ọdịnala okpukpe na nke amamihe dị iche iche na Chosŏn Korea n'oge ahụ (Kallander 2013: 41-42; P'yo Yŏng- sam 2004: 59-60). Afọ ndị a dị oke mkpa n'ịmepụta echiche Ch'oe Che-u na echiche ya banyere mmekọrịta nke ụkpụrụ okpukpe na idozi nsogbu na-arịwanye elu na-eche Chosŏn Korea. N'oge a, Korea nọ na-enwe ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na East Asia na-enwe ọnụnọ na-arịwanye elu nke alaeze ukwu ọdịda anyanwụ na okpukpe.
Ahụmahụ nke mechara kwụsị Ch'oe Che-u guzobere òtù okpukpe ọhụrụ mere na 1860. N'ịbụ onye laghachiri ezinụlọ ya na mpụga Kyŏngju, Ch'oe Che-u jidere ọrịa. N'oge ahụ, o nwere ahụmahụ miri emi na Chineke, bụ onye kpọrọ ya ka ọ kụzie eziokwu ma nye ya mmụọ nsọ dị nsọ (chumun) na ọtụmọkpọ dị nsọ ma ọ bụ eserese (yngngbu). Mgbe ahụmịhe ahụ, Ch'oe sere eserese na mpempe akwụkwọ wee drankụọ ntụ ma gwọọ ọrịa ya. Mgbe ahụ, ọ gara n'ihu ịkọtara ezinụlọ ya na ndị enyi ya ahụmịhe na nkuzi ya wee gbasaa ebe ndịda nke Korea (Beirne 2009: 37-50; Kallander 2013: 58-61).
Ozizi ohuru a nabatara ndi oru ugbo na ndi ogbenye ndi oka mmuta. Ndị a bụ ndị enweghị afọ ojuju na steeti ọha mmadụ dịka ọ dị, ma eleghị anya ha hụrụ olileanya na nkuzi ọhụrụ ahụ. Ch'oe Che-u gosipụtara ozizi ọhụrụ ya dị ka njikọta nke Confucianism, Buddha, na Daoism, ha niile nwere ogologo akụkọ na Korea. Agbanyeghị, ọ kwusiri ike na Wayzọ ya dịkwa iche na nkuzi atọ a n'ihi na ọ dịịrị ndị mmadụ mfe ma dị mfe iso (Ọ bụrụ na ị chọrọ 1942: 141, 160-61). Site na ijikọta ụkpụrụ ndị bụ isi site na Confucianism, Buddha, Daoism, na ihe ọdịnala ọdịnala ndị Korea na okpukpe ọhụrụ ya, o doro anya na Ch'oe Che-u chọrọ ịmepụta ụzọ ọhụrụ nke jikọtara ụzọ kachasị mma nke echiche Korea iji mee ka Korea nweghachi ime mmụọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. O nwere ike ịbụ n'ihi nke a ka ọ kpọrọ ngagharị ya Tonghak ma ọ bụ Eastern Learning, ọkachasị iji mata ọdịiche dị n'etiti mmebi iwu nke Katọlik, nke a kpọrọ Ọchị ma ọ bụ Western Learning (Ihe 1964: 4-8). Ememe ịgwọ ọrịa na arịrịọ nyekwara aka mee ka ndị mmadụ nwekwuo mmasị na ya. Newzọ ọhụrụ a nke ijikọta echiche ndị a maara nke ọma ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị nye ndị ka metụtara ọdịnala Korea, mana ndị chọkwara mgbanwe dị ukwuu n'okpukpe na ọha mmadụ.
Ozizi a bụ ihe arụ nye ndị neo-Confucian ọkà mmụta-ndị na-achị gọọmentị Korea. Mkpagbu gọọmentị malitere nke ukwuu na ngwụsị 1863. Na mbido 1864, kansụl steeti ahụ machibidoro Tonghak iwu, nke a kpọrọ Ch'oe Che-u bụ onye na-emebi iwu ma kwupụta Tonghak dị ka heterodox. E jidere Che-u na obere oge na Kyŏngju, ya na ụfọdụ ndị ezinụlọ ya na ndị ọzọ na-eso ụzọ. E zigara ha na Seoul wee gaa Taegu na ndịda ọwụwa anyanwụ Korea, bụ ebe e gburu Ch'oe Che-u na Eprel 1864. A gbara ọrụ ya ọkụ, ma weghachite ozu ya n'ụlọ ya na mpaghara Kyŏngju (Young 2014: 12-13).
Tonghak anwụghị na Ch'oe Che-u, n'agbanyeghị. Onye ikwu dị anya, Si'o-hyŏng (1827-1898), [Foto dị n'aka nri] hazigharịrị okpukperechi n'oge 1870 na 1880's (Young 2014: 13-16). Uto a na-elekwasịkarị anya na mpaghara ndịda Korea. Ọ bụ ezie na Tonghak ka bụ onye iwu na-akwadoghị ma bụrụ onye a na-akpagbu kwa oge, gọọmentị Korea nọ na-etinyekarị onwe ya n'ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na isi obodo na ịba ụba mbata mba ọzọ. Ebe ọ bụ na uto Tonghak dị anya site na isi obodo ahụ, ọ nwere ike itolite dị ka nzukọ nzuzo n'etiti ndị nkịtị na ndị ọgụgụ isi na-enweghị isi na mpaghara ndị a dịpụrụ adịpụ gaa na netwọkụ nke ndị kwere ekwe nke ọma (Young 2014: 14-15).
'Si-hyŏng' S'o lekọtara mkpokọta na mbipụta nke nkuzi nna nna ya. Ndị a ghọrọ mpịakọta abụọ dị iche iche, Ụdị ihe atụ (Akwụkwọ zuru ezu nke Akwụkwọ Nsọ) n'asụsụ Chinese oge gboo, na Yongdam yusa (Abụ nke Yongdam), n'asụsụ Korean. Ndị a na-etolite ntọala nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ Tonghak ma bipụtara ya n'ụdị osisi na mbido 1880 (Kallander 2013: 95-96). Si'o-hyŏng na-achoputakwara okwu nke ya na nkuzi Tonghak nke ghọkwara ihe di nkpa nke akwukwo Tonghak / Ch'ndogyo.
Enweghị afọ ojuju na ọnọdụ iwu na-akwadoghị nke Tonghak tinyere ndị isi ọhaneze chọrọ maka mgbanwe nke nrụrụ aka gọọmentị na ụtụ isi dugara Tonghak Peasant Rebellion nke 1894. [Foto dị n'aka nri] Akụkụ mbụ nke nnupụisi n'oge opupu ihe ubi nke 1894 bụ etiti South Chŏlla mpaghara ma bụrụ nke Ch byn Pong-jun duziri, onye ndu nwere obi uto nke Tonghak's Southern Assembly onye duuru ndị agha Tonghak gaa mmeri dị ukwuu karịa ndị agha gọọmentị. Si-hyŏng ch'o choro ikwenye agha ma na mbu megidere omume Chŏn. Ihe ịga nke ọma nke nnupụisi ahụ mere ka ndị eze Korea rịọ maka enyemaka site na China iji kwụsị nnupụisi ahụ. Japan zigara ndị agha ka ha chebe ọdịmma ya na Korea ma weghara isi obodo Seoul ngwa ngwa. Nke a ga - ebute Agha Sino-Japanese nke 1894 - 1895 nke ga - enyere aka ịgbasa alaeze Japan na East Asia (Kallander 2013: 117-21; Young 2014: 21-25).
N'ịhụ nnwere onwe nke mba ahụ na nchebe eze nọ n'ihe egwu, Si-hyŏng Si gbanwere mmegide mbụ ya na ọgba aghara ahụ. N'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1894, ndị agha Tonghak na-achị ala ọzọ bilitere ọzọ. Otú ọ dị, e meriri ha kpamkpam n'ọgụ nke Kongju na Central Korea na njedebe nke 1894 na Tonghak nwere mkpagbu kpụ ọkụ n'ọnụ nke mebiri nzukọ ya wee duga ọnwụ nke ọtụtụ puku ndị kwere ekwe (Kallander 2013: 121-22; Young 2014: 25-27). Ekwesiri ighota na ndi sonyere na nnupu isi ahu bu ndi mmadu ndi nwere nsogbu site na obodo nile, ma obughi nani ndi oru ugbo. Ọtụtụ n'ime ndị nnupụisi ahụ abụghị ndị Tonghak, ma ndị nnupụisi ahụ tụkwasịrị obi ọtụtụ ndị kwere ekwe Tonghak maka nduzi na na okpukpe okpukpe Tonghak maka nzukọ ha. Ndị nnupụisi ahụ, n'agbanyeghị na ha na-eguzosi ike n'ihe nye eze ahụ, dị n'otu megide nrụrụ aka gọọmentị, mmegbu na ịkpa ókè agbụrụ, yana nnabata ndị Japan tinyere gọọmentị Korea. N'agbanyeghị nnupụisi ahụ mechara daa, ọ kpatara nnukwu mgbanwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Korea na East Asia. Nnupụisi nke ndị nnupụisi ahụ maka ikpe ziri ezi nke ọha na eze na ọbụbụeze mba enyela mmụọ nsọ maka mmegharị ndị ọzọ na-akwado mgbanwe gọọmentị na ikpe ziri ezi nke ọha mmadụ.
Ọ bụ ezie na nnupụisi akụkọ ihe mere eme nke 1894 dịgidere ruo taa, mmetụta ya ozugbo na Tonghak bụ ọdachi. Egburu Chŏn Pong-jun na 1895 na ndị isi Tonghak ndị ọzọ ka a chụpụrụ n'ime ala. Ebe okpukperechi nke okpukperechi na mpaghara ndịda bụ nke e megidere mkpagbu siri ike, nke dugara n'ọnwụ nke ọtụtụ puku na njedebe nke netwọkụ nke ndị kwere ekwe ahaziri. E jidere Si-hyŏng onwe ya na 1898.
Ọzọkwa, Tonghak chere ihu oge nhazi na enweghị mgbagwoju anya. Onye ndu ọhụụ na-adọrọ adọrọ, Son Pyŏng-hŭi (1861-1922), weghachitere ya, [Foto dị n'aka nri] bụ onye weghaara onye ndu kacha elu na 1900. Ọkpara chere ihu na ihe ịma aka nke iweghachite nzukọ Tonghak na ime ka ọ dị ugbu a ka ọ na - ahụ anya. na ọ nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi n'ụkpụrụ ndị e hiwere ya, oge niile n'okpuru ndị ọchịchị Japan. N'ihi mkpagbu ndị ọchịchị na-aga n'ihu na-akpagbu okpukpe ahụ, Son kwagara Japan na Machị 1901, wee gaa n'ihu na-elekọta nzukọ a n'ime afọ ise ọ chụpụrụ onwe ya na mba a. Mgbe Japan nọ, Ọkpara gara n'ihu na ndị isi Tonghak na ndị nnọchi anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị Korea bụ ndị bi na Japan (Young 2014: 40-43, 53-54, 62-67; Kallander 2013: 128-32) na-enwe nzukọ. Mkparịta ụka nke ndị mgbanwe a mere ka Ọkpara kwubie na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze chọrọ mgbanwe na Tonghak kwesịrị ịnọ na-ebute ụzọ n'usoro a.
Agha Russo-Japanese malitere na mbido 1904, Korea weghaara mmetụta na ọrụ Japan n'oge na-adịghị anya ka Japan meriri n'agha ahụ. Son Pyŏng-hŭi nwere olile anya iji oge mgbanwe a mee ihe iji kwalite mgbanwe ọchịchị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana agbaghapụrụ mgbalị ndị a ngwa ngwa. Ejikọtara ụfọdụ ndị isi Tonghak isonyere ndị agha Japan ma kwado nchekwa Japan na Korea na 1905. Nwa a megidere nke a na December 5, 1905, ọ kwupụtara mgbanwe nke aha okpukpe okpukpe site na Tonghak ruo Ch ' .ndogyo. Nke a bụ akụkụ nke mbọ ya iji mesighachi onye ndu ya n'okpukpe ma weghachite ya na ịgbaso ofzọ nke Eluigwe iji gbanwee mmadụ na ọha mmadụ. (Na-eto eto 2014: 104-06). Nwa laghachiri na Korea na Jenụwarị 1906 wee chụpụ ndị Japan na-esite n'okpukpe ma weghachi ọchịchị ya na ndu na nduzi Ch'ndogyo. Ọ gbara arụkwaghịm na onye ndu nke Ch'ndogyo na 1907 ma nwee ihe ịga nke ọma na 1908 site n'aka Pak In-ho (1854-1940) (Ch'úgygyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe 2007: 136-37). Otú ọ dị, Ọkpara gara n'ihu na-akụzi ihe, ọ na-enye aka n'itinye nduzi Ch'ndogyo dị ka okpukpe na-emesi mgbanwe nke onye ọ bụla ike site na ịkpọtụrụ Chineke na-eduga na mgbanwe nke ọha mmadụ.
Ọ bụ ezie na nkwenkwe Ch'ndogyo nwere mmetụta mmekọrịta ọha na eze siri ike, Ọkpara de-kwusiri ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na afọ ikpeazụ nke nchebe. o gosiputara na obu ezi uche kemgbe August 22, 1910, edere nkwekọrịta nke mgbakwunye n'etiti Japan na Korea nke hiwere afọ iri atọ na ise nke ọchịchị ndị ọchịchị Japan na Korea. Naanị ndị okpukpe kwere ka ha nọrọ n'okpuru ndị isi Korea na afọ mbụ mmegbu nke ọchịchị na-achịkwa yana n'ihi nke a, Ch'ndogyo lanarịrị dị ka nzukọ okpukpe. N'agbanyeghị nlebara anya siri ike, Ch'ndogyo gara n'ihu na ọrụ agụmakwụkwọ ya na agụmakwụkwọ wee nwee ike ịga ije eriri dị n'etiti ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ọma n'oge afọ iri mbụ siri ike nke ọchịchị colonial.
Na March 1, 1919, njikọ nke Ch'ndogyo, Onye Kraịst Protestant, na ndị isi Buddha ndị na-eme mgbanwe gbakọtara iji bido ngagharị nke March First iji kwado nnwere onwe Korea. [Foto dị n'aka nri] N'ime mmadụ iri atọ na atọ bịanyere aka na nkwupụta nke Korea nke Onwe, mmadụ iri na ise bụ ndị na-eso Ch'ndogyo, Son Son Pong-hŭi bụ onye mbinye aka mbụ. Ndị ọchịchị ndị ọchịchị colonial jisiri ike mee ka ngagharị iwe nke mba niile mee ka ọnụọgụgụ, mmerụ na ọnwụ nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu. Son Pyŏng-hŭi na ndị isi ndị isi Ch'ndogyo so na ndị a nwara ma tụọ mkpọrọ maka ọrụ ha. Ọ bụ ezie na nkwupụta ahụ na nkwado nkwado ndị so ya enwetaghị nnwere onwe, ọ bụ ngosipụta siri ike nke ịhụ mba n'anya Korea wee gaa n'ihu na-eme ncheta ruo taa, ọkachasị na South Korea. N'ụzọ dị mwute, ahụike Son Pyŏng-hŭi jụrụ n'ụlọ mkpọrọ wee hapụ ya, mana ọ nwụrụ obere oge na 1922. (Ch'ŏndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe 2007: 160-85; Hong Chang-hwa 1992: 73 ).
Na njedebe nke March First Movement, ndị na-eto eto Ch'ndogyo kwadoro ntọala ọdịbendị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ga-emesị bụrụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Ch'ndogyo ch'ŏngnyŏndang (Ŏtù Ndị Ntorobịa Ch'ndogyo) na Septemba 2, 1923 (Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe 2007: 207-08). Nzukọ a na-achịkwa, nke nwere ọtụtụ nku na ndị ọkachamara, nyere ndị na-eme Ch'ndogyo ohere ka ha bụrụ ndị na-eme ihe nkiri dị mkpa na mmemme ọdịbendị na mmekọrịta ọhụrụ nke nwere ọganihu na 1920s. Organizationstù dị iche iche dị mkpa karịsịa na akwụkwọ ọdịbendị, karịsịa magazin ahụ Kaebyŏk (Creation), nke ghọrọ nnọkọ maka arụmụka ọdịbendị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'etiti obodo ndị Korea. Ndị otu mbipụta nke otu, Kaebyŏksa, bipụtara akwụkwọ akụkọ ọdịbendị ndị ọzọ pụrụ iche na 1920s, dịka Sịnyŏsŏng (Nwanyị Ọhụrụ), Rini (Ndị na-eto eto), na Haksaeng (Mmụta) (Yim Hyŏng-jin 2004: 191).
Nwa Pyŏng-hŭi nwụrụ na 1922 dugara n'arụmụka n'etiti okpukpe banyere usoro nhazi ya. Arụmụka ahụ bịara bụrụ ihe jọgburu onwe ya na na 1925, Ch'ndogyo kewara n'ime Old na New Factions (2007: 217-20) Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe. Ngalaba abụọ ahụ na-ebikọ otu ụlọ, mana ha zutere n'oge dị iche iche wee nwee ọfịs dị iche iche. Ha na-agbasakwa agbụrụ dị iche iche, ọdịbendị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Agbanyeghị na otu dị iche iche ejikọtara na Old na New Faction Ch'ndogyo gara n'ihu na-arụsi ọrụ ike na ọdịbendị na oge 1920s na-emepe emepe, nkewa ndị a na-egbochi ike na arụmọrụ ha.
Enwere njikọ nke otu abụọ ahụ na Disemba 1930 nke mere ka njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Omume dị n'otu adịteghị aka, agbanyeghị, dịka nkewa nkewa mere ka mweghachi nke Old na New Faction na njedebe nke 1932. Omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ọha na eze dị obere karịa na 1930s. Ọganihu ndị ọchịchị ndị ọchịchị Japan na-ada ka Japan malitere agha ya nke mgbasawanye na Asia-Pacific dugara na njedebe nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na 1939 (Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe) 2007: 263). Ejikọtara òtù abụọ ahụ n'okpuru nrụgide siri ike sitere n'aka ndị ọchịchị Japan na 1940. Ya na ndị otu okpukpe na mmekọrịta ọha na eze, a manyere Ch'ndogyo ime ihe maka nkwado agha Japan.
Mgbe e merisịrị Japan na Agha Worldwa nke Abụọ na August 15, 1945, Ch'ndogyo banyere oge nhazigharị. Ọtụtụ n'ime ndị isi ya sonyere na kọmitii ọhụrụ nke ndị Korea Republic nke oge ha guzobere mgbe a tọhapụrụ ha mgbe nnwere onwe gasịrị (2007: 387) Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe. A hazigharịrị òtù okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ch'ndogyo na Ọktoba 1945 (P'yo Yŏng-sam 1980a: 20). Nke a gụnyere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-akpọ Ch'ndogyo Ch'ngngang (Ch'ndogyo Young Friends Party). Otú ọ dị, nkewa nke ala mmiri ahụ dị na mpaghara Soviet na America na esemokwu na-arịwanye elu n'etiti United States na Soviet Union mere ka ọ na-esiwanye ike ịgafe ókè ahụ site na December 1945. E gosipụtara n'ụzọ doro anya ihe mgbochi ndị na-arịwanye elu n'idebe isi ụlọ ọrụ dị na Seoul mgbe ndị ọchịchị Soviet gbochiri ndị nnọchi anya ugwu Ch'ndogyo ka ha na-aga nzukọ mba na Seoul ịgafe na South na Eprel 1946 (P'yo Yŏng-sam 1980a: 20-21). Site na nke a gaa, nkwukọrịta n'etiti Ch'ndogyo na mpaghara abụọ ahụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị, na-eduga n'ịmepụta otu nzukọ dị iche iche na mpaghara ugwu na ndịda.
A haziri North Korea Ch'úgygyo Ch'ngngudang na February 1946. Ọ nwetara ọsọ ọsọ ngwa ngwa wee jisie ike debanye aha ndị otu 600,000 site na 1947 (Sejong yŏn'guso Pukhan yŏn'gu zitere 2004: 265). Ndi otu ndi otu si na ndi otu Ch'ndogyo pụta, mana emere ka ihe ndi ozo na ndi otu okpukpe di iche. Ejikọtara ihe omume okpukpe n'etiti Ch'ndogyo Disciple Network Association (Ch'ndogyo ynwŏnhoe) na North Korea Ch'ndogyo Bureau nke Okpukpe (Puk Chosŏn ch'ongmuwŏn). Nke a mere ka nhazi nke nhazi sikwuo ike n'etiti ugwu na ndịda Ch'ndogyo (Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe 2007: 397; P'yo 1980a: 23). Na mpaghara ndịda, nkewa ohuru n'etiti Old na New Faction na Mee 1946 dugara na mmegide nke ibe ma mee ka o sikwuo ike na ịmekọrịta ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. (Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe 2007: 395). Mkpebi ikpeazụ nke esemokwu a na South agaghị eme ruo 1949.
Ch'ndogyo na mpaghara ugwu na ndịda na-akwado ịdị n'otu mba na nnwere onwe ngwa ngwa ma na-akwado mmegharị dị mma iji jikọta aka ekpe na aka nri (2007: 407-08) Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe. Na Julaị 1947, Northern Ch'ngngudang kwupụtara nkwupụta na-akpọ US na USSR ka ha gbasoro ụzọ maka nnwere onwe na Korea ma kwadoo nguzobe gọọmentị dị n'otu nke ga-abụ ngosipụta nke uche onye kwuo uche nke ndị mmadụ. Agbanyeghị na enweghị njikọ ọ bụla n'etiti ngalaba ugwu na ndịda nke Ch'ngngudang n'oge a, nke a yiri ọnọdụ nke Southern Ch'ngngudang. Myirịta dị n'etiti nyiwe abụọ ahụ dugara na enyo n'aka ndị aka nri na South nke gbara ndị ọchịchị US ume ka ha jide ọtụtụ ndị na-eme njem mgbago ugwu, ọkachasị site na New Faction, na mbubreyo 1947 (Ch'ndogyo chungang ch ' ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe 2007: 413).
Ná mmalite 1948, ndị ọchịchị Soviet jụrụ ịbanye na kọmitii UN nke e mere iji guzobe ntuli aka jikọrọ ọnụ na mpaghara abụọ ahụ. Nke a malitere usoro nke mechara duga iche na ntuli aka na mpaghara abụọ na okike nke steeti abụọ na August na Septemba 1948. N'ebe ndịda, ndị nnọchi anya ndịda Ch'ngngudang sonyere na ngagharị nke onye ndọrọndọrọ ọchịchị obodo Kim Ku (1876-1949) duziri. ) megide ntuli aka di iche. Enwere atụmatụ iji duzie ngagharị iwe megide ntuli aka dị iche na South na Machị 1, 1948. Agbanyeghị, ọ nweghị mgbe ha mere n'ezie ka ndị otu Old Faction jụrụ isonye na ngagharị ha hụrụ dịka Njikọ Ọhụrụ nke na-achịkwa Southern Ch'ngngudang ( Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe 2007: 422-23, 427-28, 436). Atụmatụ ndị yiri nke a na North maka Nke Abụọ nke Abụọ nke Mbụ na-akwado gọọmentị na-emekọ ihe ọnụ na ịdị n'otu udo na North dugara nkewa dịka onye ndu nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ugwu Ch'ndogyo katọrọ atụmatụ ndị ọchịchị Kọmunist. Nke a dugara na mkpocha dịgasị iche nke Ch'ndogyo na north na ọnwụ nke nnwere onwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke okpukpe. Egburu ma ọ bụ tụọ ọtụtụ ndị na-eme mkpọtụ ugwu ugwu. Ọtụtụ n'ime ndị a tụrụ mkpọrọ ka e mesịrị gbuo n'oge Agha Korea (2007: 400, 425-427; P'yo Yŏng-sam 1980b: 77).
Na South Korea, nkwado ndị Southern Ch'ngngudang nke òtù Kim Ku maka gọọmentị dị n'otu nwetara iwe nke gọọmentị ọhụrụ Syngman Rhee. Somefọdụ ndị nnọchi anya Southern Ch'ngngudang gara North dị ka akụkụ nke usoro a wee biri n'ebe ahụ (2007: 436) nke Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe. Njikọ ndị a na North nyere gọọmentị Rhee ihe ngọpụ iji gbadata Southern Ch'ngngudang. Ọ boro ndị isi Ch'ndogyo iri atọ ebubo na ha bụ ndị nledo North Korea wee jide ha. Gọọmentị Rhee kwadoro usoro a site na igbatu Southern Ch'ngngudang. Eziokwu ahụ bụ na ndị bi na North Korea gbalịrị ịtụte Southern Ch'ngngudang n'oge ha nọ na South n'oge Agha Korea na-akpatakwa Ch'ngngudang n'anya ndị ọchịchị ndịda, nke a bụ otu n'ime ihe kpatara na enweghị Ch ' linkedndogyo jikọtara òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị taa na South Korea (2007: 438-39) Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe.
Agha Korea bụ ọdachi maka mpaghara mmiri ahụ dum na ọbụna karịa nke Ch'ndogyo, karịsịa na North. A tụrụ ndị isi okpukpe Ch'ndogyo mkpọrọ mgbe ndị agha Northern weghaara Seoul na etiti 1950. Ndị agha UN na South Korea wakporo ma weghara ọtụtụ ebe ugwu ruo na njedebe nke 1950 ruo mgbe ntinye aka ndị China na njedebe nke afọ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị kwere ekwe fọdụrụ na Ch'ndogyo sonyeere ndị agha na-agbagha ma gaa South, ebe ha nyere aka iwusi okpukpe ike ebe ahụ (2007: 443) Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an wiwŏnhoe.
A nọgidere na-akpagbu ndị nọgidere na North na mkpagbu malitere na 1951. E nwere akụkọ banyere njide na mgbuchapụ nke ndị kwere ekwe Ch'ndogyo n'oge fọdụrụnụ nke Agha Korea. A na-ekpe ndị otu Southern Ch'ngngudang bụ ndị gbabara na North ikpe, yana ndị isi okpukpe nwere njikọ na Bureaulọ Ọrụ Na-ahụ Maka Okpukpe nke Ch'ndogyo. Emechiri ụlọ ezumezu nke Ch'ndogyo na 1952, ọ bụ ezie na enwere oke ememe ndị gara n'ihu na Ch'ngngudang ruo 1954 (P'yo Yŏng-sam 1980c: 20). Site na 1959, Ch'ndogyo bụ shei nke mbụ ya, naanị Ch'ngngudang dị na akwụkwọ (Lankov 2001: 118, 120, 122-24). Okwu mkparita uka nke mere na mbido 1970s dugara na nchighari nke isi Ch'ndogyo ka North chọpụtara na Ch'ngngudang nwere ike ịba uru iji mepee kọntaktị na South. Nke a dugara na imeghe ụlọ ofufe Ch'ndogyo na Pyongyang, nke bụ maka ngosi karịa obodo na-arụsi ọrụ ike. Thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Okpukpe na North tụgharịkwara (Sejong yŏn'guso Pukhan yŏn'gu sent'ŏ 2004: 270-72).
Na South Korea, Ch'ndogyo meriri nkewa nkewa ya wee guzobe usoro iwu ọhụrụ yana usoro ọchịchị site na 1954. Nke a gbadoro ụkwụ na ntuli aka onye kwuo uche nke ndị isi ya na onye ndu ndị nnọchi anya, yana isi nzukọ ahọpụtara maka mmadụ atọ na ise pere mpe Okwu Afọ. Otú ọ dị, nkewa, ọgba aghara na nhazi nke Agha Korea kpatara, na mkpagbu na North ebe ọ nwere ọtụtụ ndị otu, emetụtawo nzukọ okpukpe ahụ. N'ihi nke a, Ch'ndogyo gosipụtara enweghị ike karịa okpukpe ndị ọzọ na South Korea nke ime mgbanwe na ọha mmadụ na-emepe emepe ngwa ngwa ma na-arịọ ndị na-eso ụzọ ọhụrụ na ọha mmadụ gbanwere nke ọma. Mkpagbu nke Ch'úgygyo na North mere n'ezie ka onyinyo ya dị mma na South, mana Ch'ndogyo họọrọ ịnọgide na-enwe ọkwá dị elu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Enwekwara ike nke a site na enweghi ikike nke mmadu na nke aku na uba. Ch'ndogyo abụrụla onyinyo nke onye mbụ ya na narị afọ nke iri abụọ na otu, na-alụso ọgbakọ ndị merela agadi ọgụ, enweghị mgbanwe, nsogbu na njigide, na enweghị akụ na ụba.
Ozizi Ch'ndogyo nke na nae ch'ŏn (Aremụ mmadụ bụ Eluigwe) bụ ụkpụrụ ya kacha mara amara na ọ bụ ntọala nke echiche ya banyere Chineke. Son Pyŏng-hŭi gosipụtara ozizi a n'ụdị 1907, mana mmalite nke ụkpụrụ a apụtaworị na nkuzi nke onye guzobere Tonghak, Ch'oe Che-u, na onye nọchiri ya, Ch'o Si-hyeng . Ozizi Tonghak banyere Chineke na ụmụ mmadụ bụ usoro nke mbido nwayọ nwayọ rue nkwenkwe na ịdị adị nke Chukwu na okike, yana ngosipụta ya kachasị elu na ụmụ mmadụ nwere nghọta. Ahụhụ mbụ Che-u na Chineke gụnyere ịnụrụ olu nke gosipụtara onwe ya Sangje, aha ochie nke China maka aha Chineke. N'oge ahụmịhe a, enyere ya ikike, ịgụghachi ya bụ nke dị mkpa na Ch'tegygyo taa:
Si ch'ŏnju chohwa chụng yŏngse pulmang mansa chi
“N’iburu Onye-nwe nke Elu-igwe, aga m abụrụ otu onye na ihe nile ekere eke; icheta Onyenweanyi rue mgbe ebighebi, aga m achota ihe bu isi ihe nile ”(Beirne 2009: 118)
Echiche nke "iburu Onyenwe anyị nke eluigwe," nke e mechara kọwaa dị ka ọ dị n'obi na ike mmụọ nke Eluigwe na Ala, yana n'ime mmadụ niile, na-agba akaebe n'eziokwu bụ na ntọala nke oge a na nae ch'ŏn Ozizi ahu putara ihe na nkuzi nke onye guzobere ya. Ch'oe Che-u kwusiri ike na ịbụ a kunja, ma ọ bụ onye dị ebube, adabereghị na mmụta, kama na otu onye si buru eluigwe. Nke a bụ ihe na-egosi Tonghak na Ch'ndogyo na-akụzi na Chukwu ma ọ bụ Eluigwe bu n'obi mmadụ wee tinye ihe niile e kere eke (Beirne 2009: 58, 62-63, 171).
Onye nọchiri ya, Si'o-hyhóng, nwere ohere karịa iji gbasaa n'echiche nke onye bu ya ụzọ. O mere njikọ chiri anya n’etiti mmadụ na eluigwe site na ime ka echiche nke onye guzobere pụta ìhè banyere ịchọta Chineke n’ime obi mmadụ. Nke a mechara duga nkuzi ya sain yŏch'ŏn, ma ọ bụ “ijere ndị mmadụ ozi dị ka a ga-asị na ha bụ Eluigwe.” Ọ kụziri na usoro ndị sitere n'okike bụ akụkụ nke Chineke, si otú a na-ewusi atụmatụ ndị na-adịghị mma nke ozizi Tonghak (Hwang Sŏn-hŭi 1996: 70-76). Omume ọma ziri ezi ghọrọ ụzọ isi gosipụta nsọpụrụ mmadụ maka Eluigwe. Si-hyhóng Si choro jikọtara otu mmadu si mesoo Eluigwe na otu mmadu si mesoo okike na ndi ozo. Nke a bụ ngosipụta dị irè nke ijere ndị mmadụ ozi dị ka a ga - asị na ha bụ Eluigwe. Sain yŏch'ŏn dugara n'echiche nke ndiegwu (Atọ ahụ). Nke a gụnyere ịkwanyere eluigwe ugwu (ịnwụchu), ịsọpụrụ ndị mmadụ (kịngin), na ịsọpụrụ ihe (kịngmul). Ọ bụ site n'ije ozi na ịsọpụrụ ndị ọzọ na ihe okike ka otu onye a na-akwanyere ùgwù n'eluigwe, n'ihi na ndị a bụ ngosipụta anụ ahụ nke Eluigwe (Young 2014: 144-45).
Nwa Pyŏng-hŭi kwadokwara nkuzi nke onye bu ya ụzọ nke Chineke bi n'ime obi mmadụ ma jupụta ihe niile e kere eke. Nkuzi na omume okpukpe bu iji nyere ndi mmadu aka ichota eziokwu a ma nyere aka gosiputa ya n’ime onwe ha na ihe nile. Ozi bu isi nke Nwa bu na elu-igwe bu mbido na ntoala nke ihe nile ekere eke, na apughi ihu ya ozo. Ndị mmadụ nwere eluigwe n'ime ọdịdị ha, mana ịkpọtụrụ ụwa nkịtị na nhọrọ na-ezighi ezi na-eduga nbelata ngosipụta nke ìhè nke eluigwe. Site na nghota nke idi n’otu nke Chineke, umu mmadu, na ihe nile ekere eke, ndi mmadu puru ibu ihe nchu aja nke ihe ndia site na ikuzi ihe nke oma, omume oma, na ikuputa ndu nke ime mmuo nke g’enye ha aka ka ha buru ndi oru nke Eluigwe n’uwa nke kachasị, ọha mmadụ. Ozizi Ch'ndogyo si otú a nye nkwado maka imeziwanye onwe ya na ụkpụrụ omume, kamakwa gosipụtara mkpa ọ dị ime ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji wulite ebe omume ọma nke eluigwe nwere ike ịpụta ụwa (Young 2014: 145-52).
Mgbe Son Pyŏng-hŭi chepụtara ahịrịokwu ahụ na nae ch'ŏn na 1907, egosiri ya dika njedebe nke usoro ngbanwe ụwa nke nwere ọganihu site na ofufe okike, na polytheism, na monotheism. Ọ bụ Ch'oe Che-u pụrụ iche iji chee ya nye ụwa (Ch'ndogyo kyŏngjŏn 1997: 558-59). Nwa kwuru, sị:
The Taesinsa (Great Divine Teacher [Ch'oe Che-u]) bu onye guzobere okpukpe anyi. O buru na mmadu achikota uche ya di iche-iche na nkenke, ihe di nkpa bu na ndi mmadu bu Eluigwe (na nae ch'ŏn) (Ch'ndogyo kyŏngjŏn 1997: 560).
Ọrụ nkuzi nke ngwụcha nke 1980 chịkọtara nke a:
Ruo ugbu a, a hụrụ ụmụ mmadụ na Chineke dị iche na ibe ha, ebe Chineke hụrụ ka onye dị elu ma ụmụ mmadụ nọ n'okpuru ma nọrọ n'okpuru Chineke.
"Na nae ch'ŏn”Pụtara ngbanwe nke ọgbọ site n'echiche dabere na Chineke ma lekwasị anya na Chineke gaa na nke mmadụ na-elekwasị anya na ụmụ mmadụ (O Ik-che 1989: 44).
Na nae ch'ŏn ga - abụ akụkụ a kacha mara amara na Ch'ndogyo wee nye ya ntọala maka nkuzi nkuzi ya na 1910 na 1920s na izi ezi ya maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụ ezie na Eluigwe bụ ike dị nsọ nke na-esiteghị n'ihe niile e kere eke wee rute ọnụnọ dị elu n'ime ụmụ mmadụ, ọ na-ehikarị ụra n'ihi nrụrụ aka nke ụwa na nhọrọ ndị na-ezighi ezi. Eluigwe na-arụ ọrụ n'ime onwe ya ozugbo a kpọtere ya n'eziokwu na ụmụ mmadụ na-ebu eluigwe n'ime onwe ha, tinye nkuzi na omume Ch'ndogyo n'ime ndụ mmadụ, ma bie ndụ ụkpụrụ omume wee bụrụ ụgbọ ala maka ọrụ nke eluigwe site na ọrụ na nkwalite nke ọma- ịbụ, ịha nhata, na ikpe ziri ezi (Young 2014: 149-52; Kim Hyŏng-gi 2004: 69-71). Nke a bụ ebumnuche bụ isi nke ndị kwere ekwe Ch'ndogyo na ndụ a. Nke a na - eduga na elekwasị anya na ụwa a na ndụ okpukpe Ch'ndogyo. Mgbe ọnwụ gasịrị, ndị mmadụ na-alaghachi n'ike nke ihe okike nke eluigwe na ala, ọ maghịkwa ọnọdụ ọnọdụ mkpụrụ obi ọ bụla dị mgbe ọ nwụsịrị. Enweghị ezigbo echiche nke eluigwe ma ọ bụ hel, mana ndị ahụ nwetara ụzọ ahụ ga-amata ịdị n'otu ha na Eluigwe, ebe ndị na-anataghị. Ihe dị mkpa bụ ịbụ arịa nke Eluigwe n'ime ahụ mmadụ na-anwụ anwụ, nke pụtara ịgwọ ahụ nke ọma iji jigide ahụ ike ya ruo mgbe ọ nwụrụ anwụ ma na-agbaso ihe ọmụma nke onwe ya ka ọ bụrụ ụzọ nke ịdị mma nke Eluigwe nye ndị nọ gburugburu ya. Ihe nketa mgbe mmadụ nwụsịrị sitere na ụmụ ya na ihe nketa onye na-enye ha, yana ihe nketa nke ezi omume mmadụ na ezinụlọ ya na ọha mmadụ n'ozuzu (Hong Chang-hwa 1992: 30-38).
Characterdị agwa asatọ nke Spirt (kangnyŏng) Ntughari nke oma kowara mmekorita di n'etiti ike nke Eluigwe nke juputara ihe nile e kere eke na-eme ka Eluigwe di n'ime obi mmadu, na-eduga n'inwe obi nke ibu nke ike nke Chineke ma gbasaa ya n'ime uwa nile:
Chigi kịmji wŏnwi taegang
“Ike kacha ike (chigi) ugbu a, ọ na-agụsi m agụụ ike ka ọ wụsara ihe niile dị ndụ. ” (Beirne 2009: 117)
Na nae ch'ŏn kpaliri echiche nke iwuli 'alaeze nke elu-igwe n'elu ụwa' (chicang ch'ŏn'guk) ma na-eme ka okike ohuru (kaebyŏk). Nke a nwere ma nke ime mmụọ ma nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Okike malitere site na mmalite nke ụwa a, mana ihe okike malitere mgbe Chineke gosipụtara onwe ya Ch'oe Che-u. Ebumnuche nke nkpughe ọhụrụ a bụ iji dozigharị ma wughachi ụwa nke tụfuru omume na ụkpụrụ nke Eluigwe.
Echiche a banyere "ihe okike ọhụrụ" kpaliri ọtụtụ ọrụ mmekọrịta Tonghak / Ch'ndogyo. A haziri Ch'ndogyo karịa Tonghak bu ụzọ, echiche a banyere "okike" bịara lekwasị anya na mgbasawanye nke okpukpe na mmekorita nke ọha na eze, ọkachasị n'akụkụ agụmakwụkwọ na nhazi 'mmadụ ọhụrụ.' Mgbe mbido Machị nke mbụ nke 1919, ndị na-eche echiche na ndị na-eme Ch'ndogyo jiri echiche a kaebyŏk iji kwado ọrụ mmekọrịta (Kim Hyŏng-gi 2004: 64-68, 93, 102). Nke a gụnyere mmemme ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka ntọala nke ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ọrụ ugbo na-arụkọ ọrụ, itinye uche siri ike na agụmakwụkwọ maka mmadụ niile, ọkachasị maka ụmụaka na ụmụ nwanyị, yana mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Kemgbe nkewa na 1945, ọrụ Ch'ndogyo abụghị ihe doro anya ma hazie.
“Alaeze eluigwe” a abụghị ụwa ọzọ, kama ọ gbadoro anya na-ewulite ọha mmadụ nke nwere ike ichekwa obodo ma hụ ọdịmma nke ndị mmadụ (echefu echefu). Kinddị ọha mmadụ a ga-ahụ na ịha nhatanha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-enye onyinye sitere n'aka ndị otu ọ bụla, ichebe ikike ha maka ndụ, udo, na ndụ dị ùgwù, na ọdịmma akụ na ụba.
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị Ch'ndogyo na-eji eme ihe taa bụ njikọ nke edemede na okwu nke ndị nna ochie atọ Tonghak (Ch'oe Che-u, Ch'oe Si-hyŏng, na Son Pyŏng-hŭi). Edere nchịkọta nke Akwụkwọ Nsọ na 1880 ma lekwasị anya na ọrụ mbụ nke Che-u, nke Ụdị ihe atụ (Akwa Edem Usiahautịn) ye Yongdam yusa (Abụ nke Yongdam). Okwu nke ndị nna ochie Tonghak ndị ọzọ bịara bipụtara iche iche na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ. Ọrụ ndị a bịara bipụtara ọnụ n'okpuru aha Ch'ndogyo kyŏngjŏn (Akwụkwọ Nsọ 'Ch'ndogyo) mgbe agha Korea gasịrị. Ọtụtụ n'ime ederede ndị a, ewezuga Yongdam yusa, nọ na gboo Chinese. Nke a emeela ka nsụgharị nke asụsụ Korea na-asụ asụsụ Chinese nke oge gboo na nke mbụ na mbipụta nke Akwụkwọ Nsọ. Ch'ndogyo etinyewo ọtụtụ ihe onwunwe na nkọwa na ọrụ ntụgharị uche na akụkụ Akwụkwọ Nsọ, nke na-esikarị ike ịgụ maka ọtụtụ ndị kwere ekwe, iji mee ka ha nwee ike ịbịakwute ndị na-ege ntị na ha nwere ike ọ gaghị ama nke ọma na Chinese oge gboo.
Ahụmahụ mbụ nke Che-u nke Che-u na 1860 metụtara emume ịgwọ ọrịa nke metụtara ị drinkingụ ntụ nke akwụkwọ ọkụ nke edere ihe ịrịba ama dị nsọ. Na mbido, a na-eme emume nnabata Tonghak na-abụkarị n'elu ugwu na ụbọchị mbụ na nke iri na ise n'ọnwa ahụ, na-esote abụ na ịgba egwu. Ntughari nke Tonghak incantation (chumun), onyinye ime mmụọ, na ịpụta mmiri dị ọcha (ch'ngngsu) iji gosipụta eluigwe bụ omume ndị ọzọ. Mgbe a haziri Ch'ndogyo na 1905, a gbanwere ememme ahụ ma dozie ya, na-elekwasị anya na isi omume ise a maara dị ka ogwan (Onu ogugu ise). Offọdụ n'ime ogwan sitere na mmalite nke omume Tonghak, ebe e kere ndị ọzọ iji gosipụta uche Ch'ndogyo na ịdị n'otu ụlọ ọrụ (Young 2014: 158). Ihe ise ahụ bụ: Chumun (Ntinye), Ch'ngngsu (Ngosipụta nke mmiri dị ọcha), Kido / simgo (Ekpere n'ime obi), na Sngngmi ("Ezi osikapa").
Enwere otutu ochicho nke bu ihe omuma nke nzuko nzuko, ulo na nke ndi mmadu. Ihe mgbochi kachasị bụ agwa iri na atọ (Original Incantation)pon chumun) ekpughere na Ch'oe Che-u mbụ ahụmahụ Chukwu na 1860. Ihe ọzọ a maara nke ọma bụ nkwanye mmụọ iri abụọ na otu na-agwakọta agwa asatọ nke Agbụrụ Spirt (kangnyŏng) Nbanye na njirimara iri na atọ (Inc'ation nke mbụ (Ch'ndogyo kyŏngjŏn 1992: 69-70; Hong Chang-hwa 1996: 207; Beirne 2009: 117-18). A na-eji ihe ndị a emekọ ọnụ maka ofufe dị n'ụlọ, karịsịa maka ezinụlọ kwa ụbọchị ememe nke ngosi nke mmiri dị ọcha nke akọwapụtara n'okpuru, yana yana ọzụzụ ọzụzụ ime mmụọ, mgbe a na-agụpụta ya n'olu dara ụda na nwayọ. Enwekwara agwa iri na anọ a maara dị ka Ntugharị Ndị Nkụzi Chineke (sinsa chumun) a na-agụ ya na mgbede Sọnde (Hong Chang-hwa 1996: 207). Ihe ndi ozo di na Chinese oge ochie ma jiri ha dika ihe enyemaka iji kpoo ụkpụrụ Chineke n'ime onwe gi ma nweta ike ime mmuo ya.
Ngosipụta nke mmiri dị ọcha iji sọpụrụ Chukwu bụ otu akụkụ nke okpukperechi ndị Korea. [Foto dị n'aka nri] Eluigwe tupu ọnwụ ya. Ngosipụta nke mmiri dị ọcha bụ akụkụ dị mkpa nke ofufe Ch'ndogyo na ọgbakọ ya na nke ụlọ kemgbe oge ahụ. Ọ bụ ihe nnọchianya nke ịdị ọcha na nghọta doro anya nke Eluigwe. Ngosipụta nke mmiri dị ọcha na-apụta ma na ọrụ ụka ọgbakọ (siil, lee anya) na n'ememe ụlọ nke na-eme kwa abalị n'ụlọ, ebe a na-agụghachi ya chumun na ekpere nkịtị (Hong Chang-hwa 1996: 208).
Simgo (ekpere nke obi) gunyere itughari n’ime uche di nwayo igakwuru Onye nwe igwe nke di n’ime onwe gi, mmadu obula na ihe nile ekere eke. Enwere ike soro ya site n’ịbụ abụ chumun ma ọ bụ olu ma ọ bụ juu ma na-atụgharị n'ime na ntụgharị uche dị jụụ (Hong Chang-hwa 1996: 209).
Servicebọchị Ọrụ (siil) bụ ụbọchị izu ike ewepụtara dị ka Sọnde site n'aka Son Pyŏng-hŭi na 1906. Ọ bụ emume nke Eziokwu na ụmụ mmadụ 'na-ebu Eluigwe' n'ime onwe ha. Ihe puru iche nke ubochi taa bu nzuko nzuko nke na-ewe awa nke gunyere inye mmiri doro anya na ikwughari nke chumun dị ka e kwuru n'elu, yana ọgbakọ na abụ abụ na ikwusa ozi ọma (Hong Chang-hwa 1996: 208). Ọrụ ndị a na-eme mgbe enwere ike n'ụlọ ezumezu ewepụtara. Meetinglọ nzukọ nzukọ ahụ, nke kachasị ukwuu na mba ahụ, dị na etiti Seoul ma wuo ya na 1921. [Foto dị n'aka nri]
'Ezi obi osikapa' (nri) bụ onyinye ọdịnala na nchịkọta obere osikapa-na mbụ otu obere iko kwa ụbọchị-site n'aka ndị otu Ch'ndogyo iji kwado ndị ọrụ ibe ha chọrọ mkpa. Emere omume a n'oge na-adịghị anya mgbe nzukọ Ch'ndogyo gasịrị, dị ka ụzọ isi nye ego maka mmekọrịta ọha na eze, okpukpe, na ọdịmma (Young 2014: 160). Onyinye a na-akwụkarị ego karịa ego osikapa.
Enwekwara ezumike pụrụ iche nke na-eme ememme ụbọchị dị mkpa na ndụ ndị nna ochie atọ Tonghak, yana ntọala nke Ch'tegygyo na ihe ndị ọzọ dị mkpa mere eme. A na-eme ọrụ pụrụ iche, dị ka ọrụ ụbọchị ụka a na-eme kwa ụbọchị nke a kọwara n'elu, n'oge ihe omume ncheta ndị a pụrụ iche.
Ebido n'ime Ch'tegygyo gụnyere ememe (ipkyosik) nke nwere ike ime n’ụlọ ma ọ bụ n’ụlọ nzukọ ebe onye a na-achogharia, onye na-akwado Ch'ndogyo kwere ekwe na onye ndu Ch'ndogyo yana ndị na-ekiri ihe na-ezukọ. [Foto dị n'aka nri] Edere akwụkwọ na chumun na nkuzi ndị ọzọ a na-ezigara onye chegharịrị (Ch'ndogyo annae 2012: 38).
Na South Korea, Ch'ndogyo nwere ọgbakọ na mba ahụ, na ọtụtụ ọgbakọ hiwere isi na mpaghara Seoul / Kyŏnggi nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị bi na South Korea. Ọgbakọ dị n'ọtụtụ obodo na obodo ndị dị na South Korea, na ọgbakọ ole na ole gbasasịa n'ime ime obodo, ha nwere ike ịdịgasị iche na nnukwu, ọ bụ ezie na ọgbakọ chọrọ chọrọ ọ dịkarịa ala mmadụ iri ise. E nwekwara otu ọgbakọ na mpaghara Kobe dị na Japan.
Onye ndu nke ọgbakọ dabere na ntuli aka n'etiti ndị otu. Ọgbakọ ndị ahụ na-ezigakwa ndị nnọchi anya ka ha votu maka ndị isi nke Central General Bureau na Seoul, ebe a na-ahọpụta ndị isi gụnyere isi nke nzukọ ahụ maka afọ atọ. E nwere nzukọ ndị nnọchi anya ugboro abụọ n'afọ, yana nnukwu mgbakọ kwa afọ atọ ọ bụla na-ahọpụta onye isi okpukpe na ndị isi Central Bureau ọzọ (Kyohŏn 2008: 17-21).
Na North Korea, ọtụtụ ihe omume Ch'úgygyo hiwere isi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ch'úgygyo Ch'ngngudang, nke ka dị na akwụkwọ dịka akụkụ nke njikọta gọọmentị nke North Korea nke Ndị Ọrụ Ndị Ọrụ na-eduzi. Ch'ngngudang nwere mmadụ iri abụọ na atọ na Mgbakọ Ndị Kasị Elu nke North Korea. A kagburu Bureaulọ Ọrụ Okpukpe nke North Korea nke Ch'ndogyo mgbe Agha Korea gasịrị, mana ọ dịghachiri na 1970. Enwere otu ụlọ nzukọ ofufe na Pyongyang. Enwere ọrụ ndị a na-eme n'ụlọ ezumezu mgbe ndị ọbịa bịara, mana ejighị n'aka ma ha na-eme ma ọ bụghị. A na-achịkwa ọrụ okpukpe, machibido, ma na-achịkwa ya.
Enwere kọntaktị n'etiti Ch'ndogyo na North na South Korea. Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe mere gọọmentị North Korea jiri weghachite Bureaulọ Ọrụ Na-ahụ Maka Okpukpe ma nye ohere ịme obere ọrụ. Enweela ihe dị ka nzukọ iri atọ n'etiti ndị isi North na South Korea Ch'ndogyo kemgbe 2005, ọkachasị na ememe ncheta nke Tonghak Rebellion na njem mbụ nke March. Nke a bụ otu n'ime kọntaktị ole na ole dị n'etiti North na South Korea ma nọgide na-agbanyeghị mmekọrịta siri ike n'etiti steeti abụọ ahụ (Yim 2017).
Ch'ndogyo nwere mmetụta dị ike n'akụkọ ihe mere eme Korea n'oge a. Agbalịala, ijigide ike ya kemgbe Agha Korea. Dị ka a hụrụ na ngalaba akụkọ ihe mere eme, nkewa mere ka ọ ghara ịdị ike na Ch'ndogyo n'akụkụ abụọ nke Mpaghara Na-adịghị Agbaghara. N'ebe ugwu, Ch'ndogyo na-adịgide ndụ site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, ndị Ch'úgygyo Ch'ngngudang, nke nwere njikọ chiri anya na ndị ọrụ na-achị achị. Na South, ebe ndị isi na-arụ ọrụ na Ch'ndogyo anọwo na mpaghara ncheta akụkọ ihe mere eme na mbọ maka ịdị n'otu Korea. Okpukpe ahụ na-arụsi ọrụ ike na ememe ncheta nke Tonghak Peasant Rebellion nke 1894 na njem nke mbụ nke 1919 (nke bụ ezumike mba na South Korea).
Agbanyeghi na ndi Ch'ndogyo so na North Korea na Japan tinyere otutu ndi otu na South Korea, enweghi nkwekorita obula, site na nzuko a iji gbasaa mba. O doro anya na ọtụtụ ndị kwere ekwe bi na North Korea; o doro anya na ọ bụ obere ọnụ ọgụgụ, Otú ọ dị. Onu ogugu di na South di iche n'etiti 20,000 na 80,000; nọmba nke mbụ nwere ike ịpụta ndị kwere ekwe nọ n'ọrụ ma nke ikpeazụ nwere ike ịbụ ọnụọgụ nke ndị niile so na ya. Nke a dịkwa nnọọ ala karịa tupu 1945 ma gosipụta na Ch'ndogyo agbasi mbọ ike ime ka a nụ ozi ya na mba Korea nke na-agbanwe ngwa ngwa.
Na South Korea, okpukpe na-eche ọgbakọ ndị meworo agadi ihu, yana nsogbu nke njigide ndị ntorobịa na enweghị ndị ntụgharị iji mezuo ọgbọ ochie na-agabiga. Nke a ebutela adịghị ike akụ na ụba nke gbochiri ọrụ okpukpe Ch'ndogyo. N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ nke ndị na-akwado ya dị na Korea taa, mmetụta Ch'ndogyo ruru ihe karịrị okpukperechi n'onwe ya, agbanyeghị. Dị ka ndị okpukpe okpukpe Korea ọhụrụ nke oge a, Ch'ndogyo na ndị isi ya nwere mmetụta dị ka ihe ngosi maka mmegharị okpukpe okpukpe Korea ndị ọzọ na ndị isi ha. Okpukpe ọhụrụ ndị Korea ndị ọzọ, dị ka ịrọ òtù nke si na òtù Kang Chŭngsan pụta (nke a na-akpọkarị Chŭngsan'gyo), gụnyere ụfọdụ ihe omume nke Tonghak na Ch'oe Che-u n'ahịrị nke ndị ozi Chineke (Young 2014: 48-49) .
Nke kachasị mkpa bụ akụkọ ihe mere eme Tonghak na Ch'ndogyo na okike nke ịhụ mba mba Korea n'oge a, na North na South Korea. Tonghak na Ch'ndogyo dị mkpa na 1894 Tonghak Peasant Rebellion na Machị mbụ 1919 Movement, yana mmekọrịta ya na ọdịnala ya n'oge ọchịchị, ndị North na South Kore hụrụ dị ka mmegharị seminal na imepụta nke oge a Echiche Korea nke mba. Mbili nke ndị ogbenye na ndị a na-emegbu emegbu na mmegharị ndị a emeela Tonghak na Ch'ndogyo mmụọ nsọ maka mmegharị nke ikpe ziri ezi, mmekọrịta onye kwuo uche ya, na nha anya mmekọrịta ọha na eze ọkachasị na South Korea. Ch'ndogyo dị na South Korea taa na-etinye ọtụtụ akụ na ncheta nke akụkọ ihe mere eme ndị a mere ka ọ na-enwu karịa ọnụọgụ ndị dị ugbu a nwere ike igosi na obodo Korea. N'agbanyeghị na mmasị dị ukwuu maka ọdịmma akụkọ ihe mere eme nke Ch'ndogyo, nke a emeghị ka uto na okpukpe ugbu a. N'ezie, ilekwasị anya na akụkọ ihe mere eme n'oge gara aga nwere ike ime ka eleghara mkpa ime mmụọ nke ndị nọ ugbu a anya ma yigharịa arụmụka banyere ọdịnihu Ch'tegygyo na otu ọ ga - esi too ma nye azịza ime mmụọ na nke obodo ọhụụ maka mgbanwe na - Ọha South Korea.
Ihe oyiyi *
* Ihe oyiyi niile egosiputara na profaịlụ a bu ihe onwunwe ma jiri ya mee ihe site na ikike nke General General Bureau.
Foto # 1: Ch'oe Che-u.
Foto # 2: Si-hyhóng Si.
Foto # 3: Nnupụisi nke Tonghak nke 1894.
Foto # 4: Nwa Pyŏng-hŭi.
Foto # 5: Mbido mbu nke March.
Foto #6: Ch'ngngsu nnukwu efere na mmiri dị ọcha.
Foto # 7: ŏlọ Nzukọ Ezumezu Ch'ndogyo.
Foto #8: Ipkyosik nnabata nnabata.
Paul, Beirne. 2009. Su-un na uwa ya nke ihe omuma: Onye guzobere okpukpe nke ala ndi Korea. Farnham: Ashgate.
Ch'ndogyo chungang ch'ongbu. 2012. Ch'ndogyo annae [Ozi banyere Ch'ndogyo]. Seoul: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu.
Ch'ndogyo chungang ch'ongbu kyosŏ p'yŏnch'an. 2007. Ch'ndogyo yaksa [A Short History of Ch'útegyo]. Seoul: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu ch'ulp'anbu.
Ch'ndogyo kyŏngjŏn [Akwụkwọ Nsọ ndị mmadụ]. Mbipụta 1997. Seoul: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu ch'ulp'anso.
Ọ bụrụ na ị chọrọ [Akụkọ banyere Ch'tegygyo]. 1942. Kyŏngsŏng [Seoul]: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu.
Hong Chang-hwa. 1996. Ch'ndogyo kyori wa sasang [Ozizi na echiche Ch'ndogyo]. Seoul: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu ch'ulp'anbu.
Hong Chang-hwa. 1992. Ch'ndogyo undongsa [Akụkọ banyere Ch'ndogyo Movement]. Seoul: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu ch'ulp'anbu.
Hwang Sŏn-hŭi. 1996. Han'guk kŭndae sasang kwa minjok undong [Echiche Korea nke oge a na otu mba]. Seoul. Hyean.
Kallander, George. 2013. Nzọpụta site na iche: Tonghak Heterodoxy na Early Modern Korea. Honolulu: University of Hawai'i Press.
Kim Hyung-gi. 2004. Huch'ŏn kaebyŏk sasang yŏn'gu [Nnyocha nke Millenarian Creative Enlightenment Thought]. P'aju: Hanul Ak'ademi.
Kyohŏn [Iwu Churchka]. 2008. Seoul: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu.
Lankov, Andrei. 2001. "Ọnwụ Ndị Na-abụghị Ọchịchị Kọmunist na North Korea (1945–1960)." Akwụkwọ nke Nnyocha Agha Nzuzo 3: 103-25.
O Ik-che. 1989. Ch'ndogyo kaegwan [Ihe ndepụta nke Ch'tegygyo]. Seoul: Ch'ndogyo chungang ch'ongbu ch'ulp'anbu.
P'yo Yŏng-sam. 2004. Tonghak 1: Suun-ŭi salm gwa saenggak [Tonghak 1: Ndụ na echiche Suun]. Seoul: T'ongnamu.
P'yo Yŏng-sam. 1980a. "Pukhan'ŭi Ch'úgygyo (bụrụ abụ) [North Korea's Ch'úgygyo (Nkebi nke M)]." Sin in'gan [Onye Ọhụrụ]. 375 (Machị): 20-30.
P'yo Yŏng-sam. 1980b. "Pukhan-ŭi Ch'úgygyo (chung) [North Korea's Ch'úgygyo (Akụkụ II)]". Sin in'gan [Newmụ mmadụ Ọhụrụ] .376 (Eprel): 72-84.
P'yo Yŏng-sam. 1980c. "Pukhan-ŭi Ch'úgygyo (ha) [North Korea si Ch'úgygyo (Akụkụ nke Atọ)]." Sin in'gan [Onye Ọhụrụ]. 377 (Mee): 19-25.
Sejong y'n'guso Pukhan y'n'gu sent'ŏ. 2004. Chosŏn nodongdang-ŭi oegwak tanch'e [Ọgbakọ ndị dị na mpụga nke Party nke Ndị Ọrụ North Korea]. 2004. Seoul: Sejong y'n'guso.
Ezigbo, Benjamin B. 1964. Mgbanwe, Nnupụisi na Eluigwe Way. Tucson: Mahadum nke Arizona Press.
Yim Hyŏng-jin. 2017. "Ch'ndogyo wa minjok t'ongil" [Ch'ndogyo na ịdị n'otu mba]. Okwu ihu ọha na Ch'úgygyo Central General Bureau, Seoul, Mee 31.
Yim, Hyŏng-Jin. 2004. Tonghak-ŭi chŏngch'i sasang: Ch'ndogyo ch'ngngang-ŭl chungsim'ŭro [Tonghak Echiche Ndị Ndọrọ Ọchịchị: Na-elekwasị anya na Ch'ndogyo ch'ngngang]. Seoul: Mosinŭn saramdŭl.
Nwata, Carl. 2014. Ọmụmụ Ihe Ọwụwa Anyanwụ na thezọ Eluigwe: Tonghak na Ch'ndogyo Movements na Twilight of Independence Korea. Honolulu: Mahadum nke Hawai'i Press.